Nayakhabar.com: कोरियामा मजदुरको तलब वृद्धि किन हुन सकेन ?
कोरियामा मजदुरको तलब वृद्धि किन हुन सकेन ?
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुरहरुको तलब वृद्धि हुने नहुने बारे अन्योल कायम नै रहेको छ । सन् २०१७ का लागि तलब तोक्न बसेको ज्वाला निर्धारण समितिको बैठक लगातार निष्कर्षविहीन भएपछि तलब वृद्धिबारे अन्योल भएको हो ।
समितिमा प्रतिनीधि,रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनीधि ९–९ जना रहने व्यवस्था छ । कुनै विषयमा निर्णय लिनुपरे मतदान गर्ने प्रकृया रहेको छ । मजदुर संगठनहरुले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सेजोङ सी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय को अगाडी निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन र दवाव मुलक कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।